बिजय शाहीका इङलिस मास्टर आए मिडियामा भन्छन् केटाकेटी हो मिस्टेक हुन्छ!भिडियो सहित !:: Mero Desh
बिजय शाहीका इङलिस मास्टर आए मिडियामा भन्छन् केटाकेटी हो मिस्टेक हुन्छ!भिडियो सहित !
Published on: ११ श्रावण २०७८, सोमबार ०२:३४
मेमोरी किङ बिजय शाहीको असली रुप Nelson Dellis ले केही दिन अघि नेपाल आएर पर्दा फास गरे पछि यति बेला उनी विवाद मा तानिएका छन! उनले सुर्खेत लगायत विभिन्न ठाउँका बेक्ती हरु बाट ५ हजारको दरले पैसा उठाएका रहेछन्! अहिले शाहीको असली थाहा पाए पछि सबैले पैसा फिर्ता चाहियो भन्दै माग गरेका छन् !
यहि विषयलाई लिएर शाहीका मास्टर अथवा गुरु मिडियामा आएर छातीमा हात ठोक्दै भन्छन् !केटाकेटी हो गल्ती भइ हाल्छ तर १४० भन्दा बढी कसैले एक रुपैयाँ दिएको छ भने म तिर्न तयार छु भनेका छन् ! जब मास्टरले मुख खोले पछि थाहा भयो साच्चिकै पैसा उठाएको रहेछ तर ९ सय जना बाट लिएको भन्ने चाहिँ डाटामा देखिएन!
यो पनि पढ्नु होस: स्वघोसित मेमोरी किङ बिजय शाहीले सुर्खेतमा झन्डै ९ सय विद्यार्थीलाई मेमोरी ट्रेनिङ दिन्छु भन्दै ५० लाख रुपैयाँ उठाएर ठगी गरेको आरोप लागेको छ । पीडितहरुले अब बिजय बिरुद्ध कानुनी प्रक्रियामा जाने पनि बताएका छन् । अहिले उनको खोजी भइ रहेको छ! उनले पैसा उठाएर भागेको स्थानीयले बताए!
मध्यरातमा भा,इरल बाल गायक अशोक दर्जिको घर तो,डफो,ड , को हुन तो,डफो,ड गर्ने ब्यक्ती ( हेर्नुहोस भिडियो)
प्रचण्डले रु‘दै भने अब म आ’त्माह‘त्या गर्छु( भिडियो हेर्नुस्)
डि’भोर्स पछि बखतेको अवस्था यस्तो छ(भिडियो)